I Ozbekistana [ʊzˌbɛkɨˈstɑːn], amin' ny fomba ôfisialy ny Repoblikan' i Ozbekistèna (ozbeka: O'zbekiston Respublikasi na Ўзбекистон Республикаси) dia firenena ao Azia Afovoany. Izao no sisin-tany amin'ny Kazakhstan amin'ny andrefana sy avaratra, Kirgizistana sy i Tajikistana ny atsinanana, ary Afganistana sy Torkmenistana ho any amin' ny tany atsimo. Alohan'ny 1991, izany dia ampahany amin'ny Firaisana Sovietika.
Raha vao ny ampahany ny persiana ary taty aoriana dia ny Timurid fanjakana, ny faritra dia nandresy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16 amin'ny Ozbeka mpifindrafindra monina, izay omiloysan ny Atsinanana tiorka teny. Ny lehibe indrindra ny ampahany amin'ny mponina eto Ozbekistana ankehitriny an'ny vondrona ara-poko misy ireo Ozbeka , ary hiteny ny zavatra fiteny, teny avy amin'ny fianakaviana Tiorka fiteny.
Ozbekistana dia voakambana amin'ny Fanjakana rosiana tamin'ny taonjato faha-19, ary tamin'ny 1924 lasa panorenana repoblika ny Firaisana Sovietika, izay fantatra amin'ny maha - Ozbeka Repoblika Sosialista Sovietika. Izany no repoblika mahaleotena avy 31 aogositra 1991 (amin'ny fomba ofisialy, amin'ny 1 septambra 1991).
Ny toe-karena Ozbekistana dia mifototra indrindra eo amin'ny famokarana ny vokatra, anisan'izany ny landihazo, ny volamena, ny hery ny uranium ampiasainy, potasioma, ary ny entona voajanahary. Na dia eo aza ny nanambara ny tsy mitanila amin'ny tetezamita ho amin'ny tsena ara-toekarena, Ozbekistana mitohy mba hihazonana henjana ny fanaraha-maso ara-toekarena, izay matetika dia mandositra ny mpampiasa vola vahiny. Ny politika tsikelikely, hentitra mifehy ny tetezamita amin'ny tsena ara-toekarena dia manana na dia izany aza dia mamokatra vokatra mahasoa ao ny endriky ny fanarenana ara-toekarena taorian'ny 1995. Ny politika anaty Ozbekistana mikasika ny zon'olombelona sy ny fahalalahan'ny tsirairay matetika no nitsikera be ny sasany fikambanana iraisam-pirenena.
Ny mponina voalohany tany: frantsay ny Varahina Taona ao amin'ny Basin Tarim dia olona Kaukasoid tena karazana avy any avaratra sy andrefana ary niresaka amin'ny fiteny izay azo sokajiana toy Mialoha na X-Tohari, razambe ny indo-Eoropeana Tohari fiteny fa ireo ao aoriana kely ao ny Tavy Tarim. Ireo tany am-boalohany voanjo nibodo ny faritra avaratra sy atsinanan'i faritra ny Basin Tarim, izay ny fasana misy mummies izay daty indray eo ho eo 1800 BC.. nandray Anjara tamin'ny ny kolontsaina tontolo mifantoka amin'ny tany lemaka afovoany Eurasia, anisan'izany maoderina avaratra Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan sy.
I Ozbekistàna ny faritra 447.400 toradroa.km. Izany no 57faha firenena lehibe indrindra eran-tany ao amin'ny faritra sy ny faha-40 ao amin'ny mponina. Eo amin'ireo firenena ao amin'ny CIS (Commonwealth of Independent States), dia ny faha-5 lehibe indrindra ao amin'ny faritra sy ny faha-3 lehibe indrindra eo amin'ny mponina.
I ozbekistana dia mitoetra eo latitude 37° sy 46° N, sy ny ara-jeografika ny halava ny 56° sy 74° E. Mitohy 1.425 km. avy any andrefana mankany atsinanana sy 930 km. avy any avaratra hatrany atsimo. Manamorona Kazakhstan sy ny farihy ranomasina aral ao ny avaratra sy ny avaratra-andrefana, Turkmenistan - andrefana, any Tajikistana ny atsimo, ary Kyrgyzstan ny avaratra, i Ozbekistana dia tsy iray ihany ny firenena lehibe indrindra ao Azia Afovoany, fa koa ny hany firenena azia afovoany ny sisin-tany ny efatra hafa. Ozbekistana ihany koa dia manana kely sisintany (latsaky ny 150 km. amin'ny Afghanistana any atsimo.
Tontolo iainana[hanova | hanova ny fango]
Ny fifidianana[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozbekistàna&oldid=1040764"